Author: Bragal Vojinn
somallia Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, 8 iyo naad, kadibna guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka soo jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si qodob walba xildhibaan u ansixiyaan.
Legalizing Stolen Soamlia December 28, Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka. Hase yeshee, habkan ma aha hab federaal ah, oo waxaa weli inta badan go’aanka yeelanaya dowladda dhexe ee uu hoggaaminayo madaxweynaha, xubanaha loo magacaabayo golaha wasiiradana, waxay ka imaan doonaan baarlamanka dibadiisa.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka dqstuurka aheyn xubnaha labada aqal.
Astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyey qaybta B ee jadwalka koowaad, waxay ka kooban tahay gaashaan buluug ah oo leh xiddaayad dahabi ah, dhexdana ku leh xiddig shangees ah oo dheeh qalin ah leh.
Dhanka kale, xiritaanka shirka maanta ayaa Wakiilka Xog-hayaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ku ammaanay dowladda Soomaaliya dadaalladeeda ku aaddan la-imaatinka jadwal ku dastuurka cusub. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Islaamku waa Diinta Dowladda. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada.
Email or Phone Cusuub Forgot account? Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in xomalia sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada.
Mar wax laga waydiiyay Bob Marley oo aamin sanaa diintan, sida uu ugu sharxi karo dadka macnaha Rastafari wuxu yiri “waxan ku oran lahaa dadka, xaqiiqsada oo ogaada in mudane, boqor Xeyle Salaasaha Itoobiya uu yahay Ilaaha Weyn, Kitaabka Injiil ayaa sidaas yiri, hadalkana wargeyska Babylon ayaa sidaas yiri, anaga oo ilmihii dastuuurka ayaa sidaas niri. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Deadly blasts rock Mogadishu near presidential palace December 22, Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada.
Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1.
Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran. Diintaas ayay dsatuurka yihiin gabadha iyo ninkeeda ee qoray Dastuurka Soomaaliya.
Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood. Fatuma Gedi breaks silence on fake sex tape as suspect arraigned in court December 28, Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka.
Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. dastuurk
Cuwub ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in smoalia badan 27 kun oo goobood, Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka. Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya. Waxaa uu sidoo kale sheegay in dastuurka cusub uu mideyn doono dalka, dhowri doono xuquuqda muwaadiniintiisa oo uu na gacan ka geysandoono keenidda xasilooni siyaasadeed.
Somalia — small improvements, big challenges December 31, Waxaa sidoo kale laga taxadaray qaabka cuub xalinayo khilafaadka ka dhasha doorashooyinka, waxaana uu ku tallinayaa dastuurka cusub in la sameeyo maxkamad gaar ah, oo xalisa khilaafaadka doorashooyinka, iyadoo aanan xil loo dhaarin doonin madaxweyne inta laga xalinayo khilaafka.
Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka. Dalka Afgaanistaan waxaa shardi looga dhigayey qofka madaxweynaha in uu muslim ahaado, in aanu heysan dhalasho kale iyo wixii la mid ah. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Xildhibaano kale oo federaalka ah oo aan la hadalnay ayaa cadeeyay in ay sugayaan dastuurka la horkeeno baarlamaanka isla markaana aanay xumaan u arkin in la raaco meeshii loo bato xitaa haddii uu dalka madaxweyne ka noqonayo ruuux labo baasaboor leh. Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Baarlamaanka ayaa soo saaraya sharciga maamuuska ay mudan yihiin calanka, heesta qaranka iyo billadaha sharata ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
Dastuurkan KMG ah ee ka waxaa uu ka duwan yahay dastuuradii hore marka laga hadlayo shuruudaha doorashada Madaxweynaha dalka oo waxaa ku qoran qodobkiisa 88aad: Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Waxaana cadaatay hada in lasoo bandhigay Dastuurkii runta ahaa ee ay qortay gabadha Jamayka u dhalatay iyo ninkeeda Itoobiyaanka ah, waxana hada la qorshaynayaa in Dastuurka Soomaaliya lagu daro in diinta Kirishtaanku ay ka mid dastuurkz diimaha rasmiga ah ee Soomaaliya.
Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1. Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta.